galmada Archives - Page 3 of 17 - iftineducation.com
calamadaha lagu garto gabdhaha siigeysta dhamaan akhriste yaasheenna sharafta innaga mudan waxaan halkaan ugu heynaa muuqaal aad u xiiso badan maxaad ka taqaan ama aad ka ogtahay sifooyinka ama calaamadaha lagu garto gabdhaha sunno gudka ah kuwaaasi oo muqan badani ka taagnaa maalmihii ugu dambeyay bal aanu wada daawanno muuqaalkaasi.
Geedkayga aad buu u yaryahay sideen u weyneeyaa ila taliya
aadan21 / September 1, 2017
Geedkayga aad buu u yaryahay sideen u weyneeyaa ila taliya WAxan ahay will wan geed yaryahay inuu ii waynado ayan raba maxan sameya ila taliya dhib weyn baa iga haysta xagga qalabka geedkayga aad buu u yaryahay talo degdeg baan idinka rabaa
Waxaan maanta idiin heynaa barnaamij cusub oo kamid ah barnaamijyadii taxana ahaa ee arimaha bulshada ee Heegan24.net. Maanta qdobkeena wuxuu ku sabsanyahay qaab loo kordhin karo kacsiga si fiicana loogu qancin karo xaaskaaga Hadaba samee amuurahan hoos ku xusan. Soo qaado ama soo diyaarso koob Malab ah iyo koob barkii Basal la ridqay ah, oo isku kari ilaa iyo inta…
MALABKA IYO GALAMDA
aadan21 / August 30, 2017
aadan21 / August 29, 2017
Dooda Isbuuca:: Guurka Qarsoodiga ah ama qudbo sirada sida qof walba ay u taqaano waxa si wacan loogu arki karaa dhamaan gobolada Somalia Min tuulo magaalo ilaa baadiyaha marka maanta waxaynu ka doodeena arinkaas, dadka taageera iyo kuwa kasoo horjeedaba Marka hore inta aanad dooda & su’aalaha u gudbin sheeko gaaban oo run ah kuna saabsan arooska qudbo sirada…
Secret marriage known as Qudbo Siro
Qudba Siro Ma ii Saxantahay!!!? ((Asc sheekh jisakalaah waxaa ku weeydinaa nin ayaa ku gursaday qudba siro ama ma aana usheegin waalid keey marka hadaa gursaday ayaa maqlay waa baadil ee maxeey ka qabtaa dinta))…. Jawaab: Alxamdulilah …maalinka ugu yar mar iyo labo ayaa lay weydiiyaa, qudba siro, rag iyo dumar.. Waa arrin Soomaalida ku badan si kastoo looga wacdiyo..…
Daawo:- Nasra Xasan oo Soomalida Mareykanka Kusoo Kordhisay Arin Ku Cusub, Waraysi Xiiso leh oo ay Bixisay
aadan21 / August 26, 2017
Waxaa dalka Mareykanka kusoo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee la imanaya halabuurrada gancsi ee ay iyagu gaarka u leeyihiin. HALKAN dhegayso WARAYSI Nasra Hassan waa gabadh dhalinyara ah oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxay leedahay xarun soo saarto kareemooyinka jirka, sidoo kale waxay sameysaa cuntooyin kala duwan, Waxayna u warantay Wariyaha VOA-da Sahra Abdi Ahmed iyadoo soo booqatay…
Saaxiibnimadu waa xidhiidh saamayn badan leh oo dhex mara laba qof. saaxiibkaa waxa uu saamayn weyn ku leeyahay dabeecadaada, habdhaqankaaga iyo shaqsiyaddaada guud. Nabigeenna NNKH waxa uu ina faray in aynu ka fiirsano qofka aan saaxiibka ka dhiganayno. sidaa darteed waxaa quman in aad la saaxiibto qof aad u hubto inuu yahay mid ku haboon in lala saaxiibo. waxa jira…
Hardo waa gabar da,yar isku darsatay qurux iyo qaayo dumar waa gabar asluub badan asluub baa usii dheereyd waana gabar ka amaan xafada ay daganeyd wanaag iyo dabci macaani baa rabi ku maneystay hardo waxa ay kasoo jeeday qoys ladan magacna ku leh deeganka ay daganaayeen, waxa ay ku nooleyd xaafada xoosh ee dagmada dharkeynley, waxeyna wax ka baran jirtay…
1- Waxad Ka Yeeshaa Mid Ku Arkaya : ha u maleyn in daminta nalka inta lagu jiro ciyaarta in ay ninka ugu filan tahay in uu raaxo helo , ogoow hadii uusan ku arkeyn raaxadadaas waa dameysaa . Dhanka aragga ninka aad ayay muhiim ugu tahay hadaba gabaryaheey waxaad xoogga saartaa in uu ku arko , haka wel welin muuqaalka…